MP U Shwe Maungs’ activities: Member of Parliament at Pyithu Hluttaw | Burma Muslim
(3) – MP U Shwe Maung’s Youtube Link http://www.youtube.com/ShweMaungTube
Coffee with Researchers: My Political Career & Cit Coffee with Researchers: My Political Career & Cit Coffee with Researchers: My Political Career and Citizenship
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်ရေး၊ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်ရေး၊ ပြန် လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်း ချမ်း စွာ ပူး တွဲ အတူနေ ထိုင်ရေး – U Shwe Maung (MP) By danyawadi December 4, 2013 Leaveacomment
MP U Shwe Maung seeks advice and help from Nobel Laureate Tutu Dy By danyawadi February 27, 2013 Leaveacomment
President U Thein Sein and wife Daw Khin Khin Win cordially greet Pyithu Hluttaw Representative for Buthidaung U Shwe Maung (a.k.a) U Abdul Razak By danyawadi February 16, 2013 Leaveacomment
Excerpt from the speech of MP U Shwe Maung @ Abdul Razak ( Part-1 ) By danyawadi July 30, 2012 Leaveacomment
Rohingya MP slams Rakhine inquiry commission report as “unfair” By danyawadi May 1, 2013 Leaveacomment
Ruling Party MP Warns of Renewed Arakan Violence By danyawadi March 15, 2013 Leaveacomment
MP hits back at official denial of Rohingya By danyawadi February 22, 2013 Leaveacomment
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်နှင့် UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs Valerie Amos တို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင်တွေ့ရစဉ် … By danyawadi December 9, 2012 1 Comment
လွှတ်တော်အမတ်ဦးရွှေမောင်မှ၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်ပြဆွေးနွေးချက် (ရုပ်/သံ) …. By danyawadi July 30, 2012 Leaveacomment
ရိုဟင်ဂျာများ ၁၈ ရာစုမတိုင်မှီ ကတည်းက ရှိခဲ့ကြောင်း လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်မှ မီဒီယာများကိုပြော By danyawadi March 11, 2013 Leaveacomment
ကုလသမ္မဂဆုံးဖြတ်ချက်MP ဦးရွှေမောင်၏ အမြင် By danyawadi November 21, 2013 Leaveacomment
ရှေ့နေငှားခွင့်မပေးခြင်းသည်ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိ ၍ ဖြစ် သည် ဟု ဦးရွှေမောင်ပြော By danyawadi September 1, 2013 Leaveacomment
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းနေသည်ဟု လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်မှပြော By danyawadi July 1, 2013 Leaveacomment
ရိုဟင်ဂျာ များသည် ကိုလိုနီခေတ် အခြေချသူများ မဟုတ်ဟု ဦးရွှေမောင် ပြောကြား By danyawadi April 2, 2013 Leaveacomment
အာဏာရ ပါတီ လွှတ်တော် အမတ် ဦးရွှေမောင်မှ အကြမ်းဖက်မှု ထပ်မံ မဖြစ်ပွား စေရန် သတိပေး By danyawadi March 15, 2013 Leaveacomment
လွှတ်တော်တွင်ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးဟုပြောဆိုခြင်းကို MPဦးရွှေမောင်မှပြန်လည်ချေပ …. By danyawadi February 23, 2013 Leaveacomment
လွှတ်တော်အမတ်ဦးရွှေမောင်မှ ဒုက္ခသည်စခန်းများ ကိစ္စရှင်းရန်အစိုးရအားတိုက်တွန်း … By danyawadi February 19, 2013 Leaveacomment
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေမောင်နှင့်ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းအင်တာဗျူး By danyawadi January 1, 2013 Leaveacomment
အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. William Burns နှင့် ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်များကိုယ်စား ဦးရွှေမောင် တွေ့ဆုံ By danyawadi October 23, 2012 Leaveacomment
US ဒု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. William Burns, တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆွေးနွေးရာတွင်ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်များ ကိုယ်စား ဦးရွှေမောင် ( ခ ) U Abdul Razak တက်ရောက် … By danyawadi October 20, 2012 Leaveacomment
လွှတ်တော်အမတ်ဦးရွှေမောင်ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းပြည်သူ့လွှတ်တော် တွင်မိန့်ခွန်းပြောကြား ….. By danyawadi July 28, 2012 Leaveacomment
ဦးရွှေမောင်ပါ(၃)ဦး၏ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မေး/ဖြေ/ဆွေးနွေး/ဆုံးဖြတ်ချက် … By danyawadi July 24, 2012 Leaveacomment